भर्चुअल माध्यमबाट नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन «
भर्चुअल माध्यमबाट नीति कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन
चालु आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै दुई महिना बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रम फैलिन नदिनका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि भर्चुअल माध्यमबाटै सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यस्तै योजना आयोगले भर्जुअल माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग आगामी बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव लिइएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले जानकारी दिए । विज्ञहरुले कर्णालीको विशेषता अनुसार कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता, कोभिड १९ को रोकथाम व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरी रोजगार सिर्जनामा लाग्न सुझाव दिएको सदस्य रोकायले बताए । विज्ञहरुले कार्यक्रम र बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका असीमित आवश्यकतालाई सीमित स्रोतबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अधुरा योजना पूरा गर्ने नयाँ योजनाका लागि अध्ययन गर्ने अध्ययन भएका र प्रतिफल दिने आयोजना अगाडि बढाइने र समग्रमा महामारी भोकमरी र रोजगारीको व्यवस्थापनका साथै दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्ने बताए ।
आयोगले गत वैशाख १२ गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सुझाव तथा मार्गनिर्देशन मागेको थियो । त्यसयता कर्णाली प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरु, कर्णाली प्रदेशस्तरीय जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुसँग विभिन्न मितिमा भर्चुअल बैठकसमेत गरिएको सदस्य डा. रोकायले बताए ।
आगामी वर्षको बजेट ३० अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ ।
जेठ १५ गते संघीय सरकार र असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले सोही अनुसार बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले आगामी बजेट ३० अर्बको सेरोफेरोमा आउने बताए । विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सिलिङसहित बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाइसकिएको उनले जनाए । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । सचिव बुढाका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेटसँगै मध्यकालीन खर्चसम्बन्धी संरचना तयार गर्न पनि भनिएको छ । “बजेट तर्जुमाका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने काम भइसकेको छ,” उनले भने ।
मन्त्रालयहरूबाट मोटामोटी खाका आइसकेपछि कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने एकिन हुने सचिव बुढा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “३० अर्बकै सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने अनुुमान गरेका छौं ।” बजेट आउनु अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र १५औं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनामा रहेका प्राथमिकतालाई समेत समेटर बजेट तर्जुमा गर्ने गरी सरकारको तयारी छ ।
आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट १७ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विषगत मन्त्रालयहरूले पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको सिलिङ अनुसार बजेट तर्जुमाको कार्य भइरहेको बताएका छन् ।
चालु बजेट कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको थियो । अहिले पनि कोरोना महामारी कायमै रहेकाले आगामी बजेटसमेत यसमै केन्द्रित गरिने भएको छ । कोरोना नियन्त्रण, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक रोजगारी, भोकमरी अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।
जुम्लाका आठैवटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो तातोपानी गाउँपालिकाको बजेट पारित भएको छ । आइतबार बसेको पालिकाको
हिमाली जिल्ला मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिकाका दर्जनौं बस्तीमा हुने चौंरी गाईपालन पछिल्लो
नेपालको वैदेशिक व्यापारका मुख्य दुई साझेदार मुलुकमध्ये भारतभन्दा चीनसँगको व्यापारघाटा अनुपात बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारमाथि खर्चको चर्को दबाब